Soomaliland Dhaqankii Islaamka “shisheeye cadaw ah ayaa uuga faaiidaysanaaya siyaasadooda ah Gooni isutaag iyo citiraaf Raadin” – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaSoomaliland Dhaqankii Islaamka “shisheeye cadaw ah ayaa uuga faaiidaysanaaya siyaasadooda ah Gooni isutaag iyo citiraaf Raadin”
September 8, 2019 marqaan Faalloyinka, Wararka maanta 3
Waxaan in yar oo kooban kaga hadlayaamaqaalkan arimo ay ka hadleen wax garadka qiimaha badan ee Soomaaliland oo la xariirta
dhaqan xumo lagu soo dhex qariyay dhaqanka suuban ee soomaaliyeed. Waxaan idinla wadaagayaa in ay jiraan caalamka siyaabo
farabadan oo dad iyo dal loo guumaysto,waxaa kamid ah tusaale in dal lagu soo duulo oo si xoog ah lagu qabsado,sidoo kale in qaab dhaqaale lagu qabsado oo laga iibsado dalka dadkii lahaa meel kastoo muhiim ah lanaguna yeesho shirkado ganaacsi oo hanta dalkaas. hadaba wax
kalaa jira oo dal lagu qabsankaro.
Waxaa jira in dhaqankaaga lagaa suuliyo,luuqadaada ama afkaaga la shiiqiyo, labadan oo keenaysa in waxaa gii aad ab iyo isir u lahayd oo dhaxalka awoowe ahayd in lagaa kaxeeyo,kukalana aad gaari waydo ileen malihid ee!! Doorin weeye lagaa dooriyo dhaqankaagii taasoo kaa dhigaysa GARANWAA ama lama yaqaan.
si hadaba dalwalbaa arinkaa u ilaashado waxa uu usamaystay wasaarad dhan oo shaqadeedu tahay oo kaliya ilaalinta dhaqanka bulshada,iyadoo laga dhawraayo in dhaqankale oo doolku yimid uu dhex galo oo badalo kan asalka ah ee bulshadu leedahay ama dalku leeyahay. Tan iyo intii dalka soomaaliyeed ku dhacay dawlad la aanta iyo burburka baahsan ee sodon jirsaday,waxaa dalkeena ku socda doorin jiilasha hada inoo kacay dhaqan ahaan. waxaana jira hay ado shisheeye oo ka faa iidaysanaaya xaaladeena maanta.
dadkeenu waa baahan yahay aqoon durugsana malaha labadan ayaa laga faa iidaysanayaa oo dad inaga ah ayaa loo soo dhiibay mashaariicdan dhaqan doorinta umada soomaaliyeed iyo somaliland intaba.
Waxaa jira dadyaw ay u tahay waxay ku raaxaystaan in umad la dhalan rogo,laga kaxeeyo waxoodii. waa uun yaab iyo camalo shaydaan. dadka soomaaliland waa dad dhaqan leh aad u sareeya,waa dad leh murti iyo gabayo,waa dad ah soomaali. maanta dhaqamada qaarkood
waxaa iska diida dawlado gaalo ah oo aan diin dhawranayn laakiin dhaqan xumadaa diidan. waxaa jira kuwo wada dhaqan xumada oo
faafinaaya kolkaa waa in laga feejignaado oo lays difaacaa.
Soomaaliland shisheeye cadaw ah ayaa uuga faaiidaysanaaya siyaasadooda ah gooni isutaag iyo citiraaf raadin,intay isleeyihiin diblamaa siyeeya
oo reer galbeed iyo caalamka qanciya si ay u helaan citiraaf ayaa cadawgu ka faa iidaystay oo hoos galiyay waxaan dhaqankeena iyo diinteena inoo cuntamin. waxaa argagax leh hadaan wax ka xuso wasaarada diinta iyo awqaafta oo leh ayaan tiifiiyada caalamka ka daawanay “AADANKA HOOS HALOO DHIGO QAYLADIISA CARUURTII IYO XAASASKII AYAA KA SEEXAN WAAYEE” fikirkaasi maha fikir qof soomaaliland ah waad wada aragtaan.
Wadamada reer galbeedka lama ogola in kor loo qaado aadanka waayo dadka gaalada ah ayaa badan mana doonayaan aadan aysan rumaysnayn iyagu mana tukanayaan kolkaa hurdadii ayuu ka arbushayaa. laakiin macnaha aadanka ayaaba ah in dadka lakiciyo oo loo dareero salaad caruur iyo ciroolaba, hadii Magaalada Hargaysa ay noqon lahayd magaalo gaaladu ku badan tahay mulimkuna yar yahay waa wax kale lakiin hada boqolkiiba boqol dadku waa muslim suni ah. Waxaa inoogu xigtay in dood lagaliyo xijaabka gabadhaheena oo layiraa quruxdoodii ayaa la qarinayaa? oo macnuhu yahay in dharka laga tuuro kadibna caro illaahay ku dhacdo kadibna ay cadaab sidaa ku galaan bal cadawnimadaa day!
waxaa inoogu xigtay in layiraahdo sameeye wixii qoomu luud lagu halaagay oo ah rag u tagaya rag iyo dumar u tagaya dumar oo macnuhu
yahay in laburburiyo dhaqankeena suuban,laynugu rido caro illaahay oo dadkeena loo horseedo cadaab aakhiro. bal cadaawadaa day!
Waxaan ku soo gunaanadayaa,wasaarada awqaafta iyo arimaha diinta, ee hada shay,abwaaniinta hadlay,aqoonayahanada iyo dhamaan wax garadka soomaaliland arinkan halmeel halooga soo jeedsado khilaaf dhexdiina ah iska ilaaliya,hal go aana isla qaata si aad ajarka uwada heshaan kuligiin ah wanaag faris xumaan reebid. wixii aan khalday waa daciifnimaday waxaanse qirayaa allaah hortiis in aana qoraalkaan u la jeedin waxaan ka ahayn
dadkeena oo ilaashada sharafkooda aduun iyo aakhiradooda,khayr unbaan la doonayaa kuligeen siyaasana waa ka marantahay u jeedkayga maqaalkan maadama dadkii soomaaliyeed uu ku dhacay waxaan uugu yeeray Asqoow siyaasadeed.
Sideedaba nin haduu hadlo sida dhaqanka u ah wax garadka soomaaliyeedba,kaftanaka lagama tago; kolkaa waxaa koonfur soomaaliya la doortay madaxweyne farmaajo,hadaba xayn siyaasiyiin ah sida xasan sheekh,fiqi,mahad salaad,odowaa, cabdishakuur oo waxaan arkay gurxamaaya garna aan meesha ku hayn,afgaalo iyo af muslim waxay ku hadlayaan ayaan garan waayay! waxa layiri waa mucaarad! kolkaas ayaan iri kuwani qaab mucaarad iyo mid mu ayid midna malaha ee waxa haya uun ASQOOW SIYAASADEED. Mindhaa siyaasadu igu soo orodmaha,maxay idinla tahay idinka? xagiina masoo gaaray Asqoow siyaasadeed wali hadaad tihiin somaliland?
W/Q Yuusuf Cuma
Waxaa haku mashquulina, dadku waa xor, qofna ma dhihi kartid, dharkaa xiro iyo jidkaa ha marin, wax badan oo kale ayaad u baahan tihiin in aad qabsataan, dadkaan aqoonsi ayey rabaan, waana xaq in ay geed dheer iyo mid gaaban u fuulaan, si aduun u aro in ay caalamka la noolaan karaan. sida caalamku u noolyahay,waa in ayu noolaadaan, loo arkaa dad jira. marka arrima bada ayaa meesha ku jira.
kkkkkkk makaa dhab wll mise waad iska yeel yeeleeysaa?
axmed sxb caamada sidooda ha u hadlin sababtoo ah bina aadamku 100% xor maahan. Waa addoomo Ilaahey waxaana qabanaysa shareecadiisa oo noloshooda oo idil u tilmaamaysa. Wax kastoo la sameynayo oo lagu hadlayo waxaa waajib ah in shareecadu xukunto oo siday sharaxday loogu dhaqmo. Qofkii dhaha xor baa waxii la rabo loo yahay waa gaalnimo oo waxaana looga dayanayaa kufaarta eraygan wax kastoo xaaraam ah ku xalaaleysata ii diimaha kula dagaala. Waxaa aad ku hadashay waa laga fiican yahay sxb. Ka fiirso.